Waxaa goordhow furmay kulankii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya – Kalfadhi
Kulanka Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu balansanaa in uu furmo 10-ka barqanimo ayaa furmay 1-da duhurnimo ee maanta waxaana ka dhashay doodo badan badan dib u dhaca ku yimid waqtigii loo balamay kulanka Golaha.
Xildhibaanada maanta xaadiray ayaa gaaraya 141 Xildhibaan sida ay shaaciyeen Gudoonka Golaha Shacabka. Guddoomiyaha Golaha Shacab Maxamed Mursal ayaa kulanka shir Guddoominaya waxa uuna nasiib darro ku tilmaamay gaabka ku yimid waqtigii loo balansanaa kulanka Baarlamaanka.
Guddoomiyaha Golaha Shacab ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa sheegay in loo baahan yahay in lasoo xaadiro kullanka Golaha shacabka sida ku cad Xeer hoosaadka Baarlamaanka. “Hadda kadib qofkii maqnaada waxaa loo gudbin doonaa Guddiga Anshaxa” ayuu yiri Guddoomiye Mursal
Guddoomiyaha Golaha Shacab ayaa ugu dameyn ku amray hab dhowrka in ay yeeriyaan xidhibaanadda ka maqan kullan si ay u ogaadaan dadka ay matalaan iyo in aysan gudan waajibaadkii shaqo ee loo idmaday.